Somaliland: "Gaas wuxuu ceeb aanay geyin dusha u saaray dadka reer Sool ee Sheekh iyo shariifba leh" - Caasimada Online
Home Warar Somaliland: “Gaas wuxuu ceeb aanay geyin dusha u saaray dadka reer Sool...
Somaliland: “Gaas wuxuu ceeb aanay geyin dusha u saaray dadka reer Sool ee Sheekh iyo shariifba leh”
Hargeysa (Caasimada Online) – Maamulka Somaliland ayaa si kulul uga jawaabay haddal kasoo yeeray maamulka Puntland kaa oo ku saleysnaa dagaalka ka socda gobolka Sool.
Xukuumada Somaliland ayaa sheegtay in C/weli Gaas uu ololinaayo colaada Sool, waxa ayna ku tilmaameen mid colaad u joog ah.
Xukuumada Somaliland waxa ay tilmaantay in C/weli Gaas uu u gafay jiritaanka dadka Gobolka Sool, isagoo meel uga dhac ku sameeyay culimada iyo dadka kale.
AKHRISO WARBIXINTA AY SOMALILAND KASOO SAARTAY HADALKA GAAS
Maamul goboleedka Soomaaliya ee Garoowe ee uu ka taliyo Cabdiweli Cali Gaas, ayaa ka hor xaqiijiyey Baarlamaanka gobolkiisa inay ka go’an tahay inuu si sharciga ka baxsan oo xad-gudub ah duullaan ugu qaado gobollo ka mid ah dhulka Somaliland ee ku suntan xuduudaha caalamiga ah ee uu ka tagey isticmaarku, isla markaana hore u ayideen ururka midnimada afrika shirkoodii ka dhacay Qaahira 1964kii, isagoo ku andacoonaya xuduud ku dhisan reernimo, taasi oo haddii si heer caalamiya iyo mid goboleedba wax laga qaban waayo daandaansiga iyo gardarada Cabdiweli ay horseedi doonto in xuduudaha dalalka Afrika aanay ahaan doonin sida ay maanta yihiin, gaar ahaanna kuwa mandaqada Geeska Afrika.
Cabdiweli Gaas wuxuu fadeexadeeyey oo ceeb aanay geyin dusha u saaray dadka reer Sool ee Sheekh iyo shariifba leh, isagoo ku tilmaamay inay yihiin dad mushahar ku beddesha masiirkooda, iyadoo marka dib loo dhugto taariikhda ay dadka reer Sool yihiin kuwo door shariif ah kaga jira sooyaalka taariikheed ee xornimo u dirirkii Soomaalida, gaar ahaan Somaliland iyagoo taas mid la mid ah ka qaatay halgankii dib u dhiska qaranimo iyo difaaca JSL.
Sidaas awgeed, waxaanu leenahay dadka xurmada iyo sharafta leh ee reer Sool xaal ka sii deelqaafkaaga joogtada ah, sidoo kale sidaad ku sheegtay maaha dad ciil qabayaal ah ee waa dad gob ah oo aan weligood yeelin wax cid kale ku sandullayso.
Ugu dambayn, waxaanu xasuusinaynaa maamulka Garoowe in Somaliland ay marwalba diyaar u tahay in wada-hadal nabadeed lagu dhammeeyo arrinta u dhexaysa Somaliland iyo Soomaaliya, iyadoo la raacayo qoddobadii hore labada dhinac ugu heshiiyeen ee ka soo baxay shirkii London ee Feberwari 2012kii, qoddobadaasi oo ka fuli waayey dhinaca Soomaaliya, sida “in wadahadallada labada dhinac xuduudahoodu noqdaan sidii labadii dal ee ay kala xukumi jireen Ingiriiska iyo Talyaanigu.” Wixii ka horreeyey 26kii June 1960kii.”